2BHK inkonzo yokuhlala @ Sakra hospital Bellandur
Le ndlu yeNkonzo ikwindawo yoshishino yaseBellandur, nje iimitha ezingama-300 ukusuka kwiSibhedlele seHlabathi saseSakra, iPassport Seva Kendra, malunga nekhilomitha ukusuka eRMZ Ecospace, ipaki yoshishino yaseCessna.
Sisakhiwo sokuma sodwa sibonelela ngamagumbi ama-2 amagumbi okulala kwaye onke amagumbi afakwe ngokupheleleyo, i-LCD TV, igumbi lokuhlambela elincanyathiselwe, i-intanethi, i-100% yogcino lwamandla.
Le 2BHK iphangaleleyo ibonelela ngekhitshi esebenza ngokupheleleyo. Eyona nto ilungele abantu abahamba ngeshishini okanye izindlu zethutyana okanye ezifutshane.
Qaphela- Sikwanezindlu ezingaphezulu ze-1 kunye ne-2 BHK ezinefenitshala epheleleyo kwindawo enye, zijonge nje ngephepha leprofayile yam ye-AirBnB.
Ukuba awuboni ukubakho kwale ndawo okanye amagumbi amabini okulala ngeentsuku zakho, nceda uqhagamshelane nam kwaye ndiza kukubonelela ngolunye uluhlu olufanayo kuba sineeyunithi ezininzi kwisakhiwo esinye.
Malunga nale Apartment:
Le yindlu yabucala kwaye izimeleyo yenkonzo eBellandur, ngaphaya kweSibhedlele seHlabathi saseSakra kunye nendlela yangaphandle yeringi.
Indawo yokuhlala ezenzelayo inendawo yokuhlala eneBalcony kunye neKumkani kunye neebhedi zendlovukazi ezinegumbi lokuhlambela elincanyathiselwe. Kukho ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo elinestovetop, ifriji, i-oveni yeMicrowave, i-Rice cooker, i-cookware njl.
Inkonzo yokugcina indlu kunye neenguqu zelinen zibandakanyiwe kwirenti yakho. Le yindawo enesango ene-24hr CCTV ebeka iliso kunye nonogada okwisiza.
Indawo yokuhlala inokufikelela kwi-elevator ene-100% yogcino lwamandla ombane.
Ivenkile eluncedo ibekwe ngaphaya kwesitrato kunye ne-Star bazaar kunye nekhemesti ekumgama nje we-2 mins enokuhamba ngaphandle kweendawo zokutyela ezininzi kunye neekhefi. La magumbi eenkonzo abekwe eBellandur Corporate Hub kunye neKoramangala, ibala eliMhlophe kunye nesixeko se-elektroniki zikumgama nje wemizuzu engama-20, esenza igumbi lethu lenkonzo lilungele bobabini abaphathi beshishini kunye nabakhenkethi bezolonwabo.
Indlu yonke yeyakho, akukho kwabelwano kwaphela nomnye umntu. Gqibezela ngasese, uzimele kwaye ngaphandle kwezithintelo zokufikelela, ikhaya lakho eBangalore.!
- Ukungena ngokuzimeleyo
-Ikhitshi labucala (lisebenza ngokupheleleyo)
-I-intanethi ye-WiFi yasimahla
-Iitshaneli zesathelayithi zeTata isibhakabhaka
- yokupaka Free
- Ukufikelela kwi-elevator
-I-100% yogcino lwamandla olubandakanya i-air conditioners, i-WiFi kunye ne-elevator.
Nceda uqaphele, sinikezela ngeMihla yonke, iVeki kunye nenyanga yokuhlala kunye nezaphulelo ezikhethekileyo zokuhlala ixesha elide. HLALA KAKHULU kwaye UGCINE OKUNGAKUMBI.